Mudaharaado Rabshado Wata Oo Maalintii 4aad Ka Socda Hindiya – Heemaal News Network
Xildhibaan Kenyan ah Oo Sheegay in Shacabka Somalida Gobolada NFD loo Hubeeyo Alshabaab.
Mudaharaado Rabshado Wata Oo Maalintii 4aad Ka Socda Hindiya
Hindiya ayaa maalintii 4aad waxa ka socda dibadbaxyo rabshado wata kuwaas oo lagaga soo horjeedo sharciga ay dawladu dabada ka riixayso ee dhinaca jinsiyada, sharcigaas oo ka caraysiiyay muslimiinta dalkaas.
Bannaanbaxyadan ayaa ku xoogan degaanada dhaca bariga Hindiya halkaas oo ay si wayn u dagan yihiin Muslimiinta ka soo jeeda Bangaladesh, ayaasha bariga Hindiya ayaa dab qabadsiiyay in kabadan dhowr iyo toban bas, waxana ay qasaare gaarsiiyeen lix saldhig tareen. Waxana nolosha degaanka gobolka West Bengel saameeyay saxmad dhinaca baabuurta ah.
Gobolka Uttar Pradesh oo ah gobolka ugu dadka badan Hindiya, oo dhaca waqooyiga wadanka, ardayda dhigata jaamacada Aligarh Muslim University (AMU), oo ah jaamacad caan ah oo la aasaasay 1920, ayaa ku biiray mudaharadaasha, waxana ay ardaydu guri guri ugaraaceen alaabada guryaha Muslimiinta iyaga oo ku baaqay in maalinta bari ah la qabto mudaharaad wayn oo ka dhan ah sharciga jinciyada ee la rabo in la meel mariyo.
Sharjeel Usmani, oo ah arday dhigta shahaadada AMU, ayaa yidhi “Muslimiintu waxa ay dareemayaan cabdi iyo faqooq lagula kacay hadii xeerkan la meel mariyo, sharcigana waa mid takooris ah, waanan ka mudaharaadaynaa ilaa inta sharcigan la laalayo.
Mudaaharaadyada ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ka tirsan gobolkan Uttar Pradesh, waxana magaalooyinka laga mudaharaaday ku jirta magaalada barakaysan ee ay Hinduuga ilaaliyeen ee Prayagraj, oo ah magaalo hore loogu magacaabi jiray Allahabad, balse sanadkii 2018kii ay dawlada raysal wasaare Modi iyo xisbigiisa xag-jirka ahi magaca ka badaleen.
Bartamaha caasimada India ee New Delhi, boqolaal arday ah ayaa isugu soo baxay gudaha iyo daafaha Jaamacadda Jamia Milia, iyagoo jeedinaya khudbado ayna dhigayaan mudaaharaadyo nabdoon oo looga soo horjeedo sharciga dhalashada iyadoo booliis badan la soo dhoobay halkaasi.
Sharcigan cusub oo jinsiyada ayaa dhigaya in si sahlan ay dhalashada dalkaasi u dalban karaan dadka haysta diimaha kale ee ka soo carara dalalka jaarka la ah Hindiya. Waxana ay dawladu tilmaantay in uu xeerkani yahay mid ilaalinaya xuquuqda dadka tirada yar ee haysta diimaha Hinduuga, Kiristanka iyo diimaha kale ee ku nool dalalka Muslinka u badan ee hindiya ku hareeraysan ee ay ka mid yihiin Pakistan, Bangaladhesh iyo Afghanistan.
Beelihii ku Dagaalamay Gobolka Mudug Oo Heshiis Hordhac ah Gaaray.(Sawirro)